Version 1.0.3 – Waa maxay sababta ma waxaad ii soo diray farriin?
August 5, 2018 by dalabyo Leave a Comment
Waxaan ku faraxsanahay in uu ku dhawaaqo version cusub, shalay la sii daayay.
version Tani waa dhan oo ku saabsan feature mail ah, iyo hagaajinta maamulka turjumaad aadanaha.
feature mail ayaa u oggolaan doona admin si aad u hesho farriimaha on turjumaadaha aadanaha ka dhigay goobta, in version xorta ah waxaad ka heli doontaa fariin sida ugu dhakhsaha badan turjumaad cusub posted. In version buuxa sidoo kale waxaad fursad u haysataa in ay oggolaadaan in farriimaha ay u xafidi (sidaa darteed waxaad heli doontaa fariin hal ka dib markii user ah ayaa turjumay qaar ka mid ah xadhig on goobta). Waxa kale oo aad fursad u hesho maalin dheef shiidid a of tarjumaadaha cusub ka dhigay goobta. Waxa kale oo aad dooran kartaa cinwaanka fariimaha loo diri doonaa, kaliya dhaaf iyada oo bannaan for email maamulka ee.
Muuqaal kale oo la wanaajiyey on version tani waa editor turjumaad backend ah, halka weli ma oggolaanayo in aad si dhab ah u turjumaan on backend ah, aad hadda maamuli kartaa tarjumaadaha si sahlan adigoo isticmaalaya feature shaandhaynta in lagu daray iyo falalka bulk in hadda si dhab ah u shaqeeyaan. 🙂
Waxaan rajeyneynaa in aan maqlo gashiga aad, iyo waxaan rajaynaynaa in aad ku raaxaysan doonaa this sii daayo cusub
Filed Under: Messages General, Shaaciyaan Release, Software Updates
Version 1.0.2 – Bal ii sheeg Halkee ka timid oo aan doono…
July 22, 2018 by dalabyo 2 Comments
version Tani waxay ku darayaa taageero la ogaado salaysan Geographic IP ayaa feature a codsaday da'doodu u danbeeyay (Marka dinos ayaa waxa ay xukuntay).
Sidee mid awood taageero u ah ogaanshaha this? Waxay ku tiirsan ee plugin fiican GeoIP Ogaanshaha by yellowtree.de. Ka dib markii ay ku rakibidda iyo kaakicin in plugin ikhtiyaarka ugu muuqan doonaa goobaha wax yar ka hooseysa ogaanshaha ACCEPT_LANGUAGES madax ku salaysan. interface The hagaagtay sidoo kale ku tusi doona waxa ay noqon doontaa natiijada aad ogaado marka aad isticmaalayso guddi maamul.
dheeraad ah oo sharxaya, haddii loo maleeyo in aad goobta ku qoran Ingiriisi iyo Isbaanish ayaa taageero. booqashooyinka A user ka Spain, luqada loo wareejiyey doonaan in ay Isbaanish (xiriir First casharka). Haddii booqasho user ka Germany inkastoo afka la ogaado sida German ah tan iyo luqada aan awood goobta la isugeeyey in version caadiga ah.
Marka labada fursadaha yihiin karti, ACCEPT_LANGUAGES qaadan doonaa ka hormariyaan.
feature waxaa labada taageeray on the free iyo version buuxa.
Haddii aad ka heli misredirection kasta marka habkaani waa karti (Waxaa la meel gaar ah halkan karti loo baaro) fadlan nala soo socodsii via foomka xiriir.
Sida had iyo jeer, waxaan rajaynayaa in aad ku raaxaysan doonaa version this.
PS. Haddii aad isticmaalayso a version buuxa ka hor iyo update ah in version cusub ee buuxa aan la muujinaya (update oo kaliya in version xorta ah) hana ka baqan – cusboonaynta in version xorta ah marka hore, ka dibna isla markiiba raaco by casriyeeyo si ay version buuxa, goobaha lahayn waa in laga badiyay.
Version 1.0.1 – widgets Your, aad jidka
July 6, 2018 by dalabyo 2 Comments
Tani version cusub, dhawaan sii daayo, na la siiyaa laba qaababka cusub:
First, awood u leh inay ku shuban widgets ka dir Upload (in si gaar ah, wp-content/uploads/transposh/widgets), tani waa qof walba kan Abuuray ay widget u gaar ah (waxaa laga yaabaa in kaliya beddelo calanka a) iyo dhibaato la xariirta plugin sababtoo ah folder widget hadda helay overridden, habkaani sidoo kale fureysaa suurtagal ah si ay u wadaagaan widgets dadka kale.
feature labaad waa dheer ee Google “rel = hreflang kale ah” habka, kaas oo asal ahaan isticmaalaya URLs oo aqoon buuxda leh tixraac kasta sida halkii URLs qaraabo, tanu waxay kor u size of htmls aad by badan (ku xiran tahay tirada ka mid ah luqadaha aad u taageeraan, kaliya tarma tirada this by size ee cinwaanka goobta oo aad haddiiba ku dari kartaa ilaa 1k codsiga kasta ah oo aan waxba). recommandation Our hadda waa kaliya in ay gab habkaani, laakiin haddii aad rabto in aad waayo aragnimo fiican in qalabka webmaster Google, ka hor tago oo ay leeyihiin xiiso leh.
Waxaan rajaynayaa in aad ku raaxaysan doonaa version this, hana ka baqan in nala soo xiriir si kasta oo cayayaanka codsiyada / feature.
Filed Under: Messages General
Version 1.0.0 – Wakhtigii waa yimid
June 16, 2018 by dalabyo 4 Comments
Transposh ayaa nool for ugu dambeeyey 10 sano ama si. Waxaan si joogta ah u dhawray plugin updated on our site halkan, oo isku dayay si loo hubiyo in shuqullada version wordpress.org.
Sida versions kala badewedu u noqday sii kordhaysa adag si ay u ilaaliyaan labada versions. Sidaa version wordpress.org ka helay dayacay.
Tan waxaa loo beddelo bilaabo daayo maanta ee version 1.0.0 on wordpress.org iyo version buuxa 1.0.0.1, kaas oo noqon doona halkan heerka cusub (versions buuxa leh oo dheeraad ah ku dhamaan doono .1)
Waa maxay faraqa u dhexeeya versions ah?
version wordpress.org waxay leedahay a 5 xadka luqadda, oo aanu ka mid ah wax widgets.
version buuxa leeyahay sifooyin badan, no xad luqadda, widgets taageero, iyo backlink ah in our site (taas oo laga yaabaa in aad doorato in aad ka saarto – akhri shuruudaha)
Maxaa kale waa cusub in version this?
Si buuxda u imtixaannay PHP 7, waa in meesha laga saaro iyo cadhada iyo ogeysiisyada deprecation
taageero map Source for our qabnay, jidaynayey si ay u Debug fudayd
Mase ka FirePHP in Chromelogger.
Ku raaxayso isticmaalaya version this!